Soo degso Airbus A380-800 VC Air France FSX & P3D - Rikoooo
downloads 313 724
Project Airbus, repack iyo 2D Panel by Rikoooo, iyo hagaajinta VC waxyoonay by Facked
Updated on 05 / 05 / 2013: cayayaanka la rajeenayo VC iyo ku daray guddiga 2D abuuray by Rikoooo ah.
Midabada Airbus A380 Air France, waa xirmo dhan! Waxay kujirtaa rooti roogaal ah oo ku saleysan A380 dhabta ah iyo dhawaaqyada caadada ah, xirmadan ayaa sidoo kale hagaajineysa kutaan-galayaasha quraaradda opaque (windshield) iyo raadiyaha. Qolka fasalka koowaad (dabaqa labaad) sidoo kale waa la qaabeeyey. Xusuusnow galaaska muraayadda hore ee muraayadda ahi waxa uu noqon karaa mid caadi ah haddii aad roob ku jirto FSX SP2 iyo P3D). 2012 Air France waxay laheyd sideed diyaaradood oo noocaan oo kale ah oo leh kuraasta 538 mid walbana ku qalabeysan matoorada "Alliance GP 7200."
Airbus A380 waa widebody diyaarad aad u sokeeye oo dheer ku-soo jiidid afar-engine double-decker uu soo saaray Airbus, hoosaad EAD ah. xubno Its waxaa dhisay inta badan ee France, Germany, Spain, iyo Boqortooyada Ingiriiska, shirka final waxaa loo sameeyaa in Toulouse, France.
Barnaamijka A380 The, wadarta kharashka horumarinta ee 12 billion euros ah, ayaa la bilaabay badhtamihii 1990 sida A3XX Airbus ah. duulimaadka ugu horeeya ee ka dhacay on 27 April 2005 in garoonka diyaaradaha Toulouse iyo adeegga ugu horeysay ee ganacsi lagu qabtay October 25, 2007 by Singapore Airlines dhexeeya Singapore iyo Sydney.
A380 waa, in 2012, diyaaradaha ugu weyn sokeeye ee adeega rakaabka, iyo diyaarad saddexaad ee ugu weyn taariikhda duulista, ka dib markii Hughes H-4 Hercules iyo Antonov An-225. sagxad sare The A380 ayaa kordhiyay weheliyaan dhererka oo dhan ku sooctey, siinta meesha kabiinka la soo 50% in ka badan ay tartan toos ah, oo Boeing 747-400. (Wikipedia)
Guddi cusub oo loo yaqaan '2D' oo uu abuuray Rikoooo + wuxuu saxay oo waafajiyay VC FSX iyo Prepar3D
Mid la HUD ee VC iyo 2D Panel, qaabab habeenkii, walxood oo guddi iyo qaar ka mid ah aaladaha caadooyinka ...
guddi 2D waa pre-rakibay oo ka mid ah xirmadan. Si kastaba ha ahaatee, aad u soo dejisan kartaa si gooni gooni ah: Download 2D Panel (VC saxo) - 8MB pa_a380_2dpanel_rik_fsx.zip
Author: Project Airbus, repack iyo 2D Panel by Rikoooo, iyo hagaajinta VC waxyoonay by Facked
Xirmooyinka Boortaqiiska ee TAP FSX & P3D